SECO တံဆိပျကိုမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် | Seco Seals Inc.
Step 1 - Seco seal placed on fitting, ready for assembly
Ready to apply torque
Step2- Wrenches hold each piece at the starting point
First torque application
Step3– Begin initial torque to spec
Step4- After initial torque, wait 15 seconds, then re-torque
Check the visible ring
Step5– Sealing ring confirms properly torqued connection
Confirmation of the correct seal
SECO7 Copper Crush Washers
SECO7 Nickel Flare Savers
Closeup of SECO7 seal on the fitting
This image showsaSECO7 37 degree copper Flared Gasket onafitting prior to installation.
37 degree Fitting
Tools and fittings needed to successfully install 37 degree SECO7 seals
SECO7 37 degree conical seal operating temperature range
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းစံ SECO7 ထုတ်ကုန်လိုင်းအပါအဝင်မြင့်မားသောဖိအားပြွန်လျောက်ပတ် gasket ကလည်းအဲ့ဒီအတွက်၏အထူးပြုကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်တစ်ဦးကကမ္ဘာကခေါင်းဆောင်။ SECO တံဆိပျ, တစ်ဦးက ISO 9001: 2008 နဲ့ AS9100C certified ရရှိထားပြီး gasket ကလည်းအဲ့ဒီအတွက်ထုတ်လုပ်သူ, စျေးသက်သာသောနှင့်မှီခိုအများဆုံးပတ်ဝန်းကျင်မှာယိုစိမ့်အဆုံးသတ်လိုက်တယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ installation ကိုဗီဒီယိုကမှန်မှန်ကန်ကန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ SECO7 37 ဒီဂရီနေမီးတောက် Tube gasket ကလည်းအဲ့ဒီအတွက်ထုတ်ကုန်လိုင်းတပ်ဆင်ရန်သည်မည်မျှလွယ်ကူပြသသည်။ ဗီဒီယိုတစ်ကားကိုကြည့်ရှုရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ အင်္ဂလိပ်ထက်အခြားဘာသာစကားများ။
ငါတို့သည်သင်တို့၏လိုအပ်ချက်များကိုစိတ်ကြိုက်ပစ္စည်းများနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ SECO7 37 ဒီဂရီနေမီးတောက် Tube gasket ကလည်းအဲ့ဒီအတွက်၏ကျယ်ပြန့်ဌန်နှင့်အတူ Pre-စုဝေးပစ္စည်းများပေး။ ဗီဒီယိုတစ်ကားကိုကြည့်ရှုရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ ကဤပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်. နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များနှင့်အတူ။ ဗီဒီယိုများဘာသာစကားမျိုးစုံအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
Seco တံဆိပျ – 100% ဖြေရှင်းချက်
SECO တံဆိပျကိုလျင်မြန်စွာတိုင်းလိုအပ်ကြောင်းကိုဖုံးလွှမ်းရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ် website ကိုကျယ်ပြန့်ခဲ့သည်။
ဒီဇိုင်နာအဘို့, ကျွန်တော်တို့ရဲ့တီထွင်ဆန်းသစ် SECO40 37 ဒီဂရီသူဌေးကဒီဇိုင်းကိုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းစံ SECO7 37 ဒီဂရီနေမီးတောက် Tube အဝတ်အစားအစမ်းဝတ်တံဆိပျအတှကျအင်ဂျင်နီယာရေးဆွဲရန်လင့်များပေး:
ဤသူရေးဆွဲ Download လုပ် သင့်ရဲ့အင်ဂျင်နီယာစနစ်တစ်ခုသို့သူတို့ကိုငါ drag and drop ထို့နောက်;
ငါတို့သည်လည်းအတူသင်တို့ကူညီနိုင်မယ့် gasket ကလည်းအဲ့ဒီအတွက်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းဖြေရှင်းနည်းကိုရွေးချယ်ခြင်း သည်သင်၏အသစ်သို့မဟုတ်လက်ရှိစီမံကိန်းအတွက်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသေးစိတျကို Download လုပ်တပ်ဆင်ညွှန်ကြားချက် ;
ထိုအတူ PDF ကို Download လုပ်အကြံပြု installation ကိုလိမ်အား လက်မ / ပေါင်အတွက် AN818 Nut သည်။
ပိုကောင်းတဲ့ဖြေရှင်းနည်းရှာနေမည်သူမဆိုအဘို့, Seco တံဆိပျကိုအစွန်းရောက်ဖိအား, ချေးနဲ့အပူချိန် application များအတွက်ဖြေရှင်းနည်းပိတျထားသောပါးလွှာသောသတ္တု “print ထုတ်မှတည်ဆောက်” အတွက်သူ့ရဲ့စွမ်းရည်များကျယ်ပြန့်ပြီ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များအကြားအမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးမြင့်သတ္တုသတ္တုပါး၏လုပ်နေကြတယ် .002 “နှင့် .015” ;
အများအတွက် PDF ဖိုင်ရယူရန် (s) ကို Download လုပ်SECO7 ပြန်ကြားရေး Sheet များ ,
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တကယ်အရွယ်အစားများအတွက် PDF ကို Download လုပ်SECO7 Size Chart ဟာ ။
AS683 ဗြာကို C နှုန်းကို install လုပ်မယ့်အမျိုးသားရေးအာကာသစံ AS3282 သကဲ့သို့, SECO တံဆိပျကိုထုတ်ကုန်ယုံကြည်စိတ်ချရသော, လေယာဉ်တန်းအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ဖို့ဒီဇိုင်းကြသည်။ Make Seco နေမီးတောက်ပြွန်လျောက်ပတ် gasket ကလည်းအဲ့ဒီအတွက် application များအတွက်သင့်ရွေးချယ်မှု Seals ။
ဤနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ပါ SECO တံဆိပျနှငျ့ကြှနျုပျတို့၏သမိုင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်။
Previous PostWelcome to Seco SealsNext PostFàilte gu SECO RÒIN
ISO 9001-2008 and AS9100C Certified